एकै पटक दुई जनासँग प्रेम - Ratopati
एकै पटक दुई जनासँग प्रेम
मिस यु ।
मिस यु टु ।
अन्तिम म्यासेज ।
आजसम्म उसले डियर भन्ने आँट गरेको छैन । मेरो एउटा स्टाटस देखेपछि उसलाई डियर भन्न डर लाग्छ रे । मनमा के छ त्यो त म बुझ्न सक्दिनँ, तर पनि उसले दिनहुँ गर्ने कुराकानीमा कहिकतै मनमा मायाको भाव लुकेको छ कि जस्तो लाग्छ ।
जसरी बाटोमा चुरोट उडाउँदै गरेका अल्लारे ठिटाहरु दुई खुट्टा उभिएकी केटी देख्न नपाउँदै, अहम्, उहुम गर्दै म्वा गर्छन्, त्यसरी नै ऊ सधैँ केही भन्न खोजेस्तो गर्छ तर अपूरै छाडिदिन्छ । टाढैबाट भए पनि किस गरेको आनन्द लिन्छन् केटाहरु अनि किसको सिकार बन्छन् बाटोमा हिँड्ने केटीहरु ।
मनदेखि माया गर्ने मानिसहरु आफ्नो कुरा खोल्न डगमगाउँछन् रे । कसैले मायालाई प्रदर्शनी सम्झिन्छन् र सजाउँछन् फेसबुकका पानाभरी, कोही लुकाएर राख्छन् दुलोभित्र पसेको मुसा जसरी ।
फुर्सद हुँदा ऊ च्याटमा घण्टौँ गफिन्थ्यो । काम र पढाइबाट भएको थकानलाई उसँगको गफमा भुलाउने गर्थें म । कहिलेकाहीँ आफ्ना साथीभाइको भन्दै माया प्रेमको कहानी सुनाउँथ्यो । यसरी कहानी सुनाइरहँदा कतै उसले आफ्नै कहानी सुनाइरहेको त छैन भन्ने लाग्थ्यो । विचरा सिङ्गल छु भन्थ्यो । के झूट बोल्यो होला र मसँग ? हुन् त मान्छे एउटासँग प्रेममा हुँदाहुँदै पनि अर्कोसँग पनि प्रममा पर्न सक्छ नि । मेरो पनि प्रमी हुँदाहँुदै उसलाई प्रमीका रुपमा मनमा सजाउन थालेकी थिएँ । मनमनै उसकी राजकुमारी बनेर सँगै आकाशमा उडेको सपना देख्न थालेकी थिए । केही दिनको च्याटको भरमा उसले मेरो मन चोरेको थियो ।
अचम्म लाग्छ आफैँलाई देखेर कोही मान्छे देख्ने बित्तिकै नबोले पनि रिस उठ्छ । कोहीसँग केही दिन बोलेपछि मनमुटाव हुन्छ । कोही मान्छेले धेरै सहयोग गरे पनि मन नै पर्दैन ।
के हो प्रेम ? कोहीसँग बोल्न र च्याट गर्न मन लाग्नु नै प्रेममा पर्नु हो र ? कसैलाई नदेख्दै प्रेम हुनसक्छ या सक्दैन ? के प्रणय दिवस नजिकिँदै गर्दा मनाउने रोज डे, किस डे, हग डे, टेडी डे, प्रपोज डे, चक्लेट डे सबै प्रेम पकाउने भाँडा हुन् ?
ऊ मुक्तक लेख्थ्यो म पनि जानी नजानी मुक्तकबाट नै रिप्लाई दिने कोसिस गर्थें । धेरै दिन मुक्तक मार्फत नै च्याट भएको थियो । ऊ किताब पढ्न मन पराउँथ्यो र म पनि । मन, विचार र रुचिहरु एउटै थिए, त्यसैले त हाम्रो सामीप्यता बढेको थियो ।
यता ब्वाइफ्रेन्डले भ्यालेन्टाइनमा के छ, प्लान बनेर सोध्थ्यो उता आफू अर्को चक्करमा थिएँ । तिमी टाढा छ्यौ बेबी के हुनु ? दिनभर पढ्ने प्लान छ भनेर रोएको इमो पठाइदिन्थे । ऊ भावुक हुन्थ्यो र मेरोभन्दा दोब्बर इमो पठाउँथ्यो । यता आफूलाई दुईतिरै च्याटको रिप्लाई दिन भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो । सल्लाह गरेरै आएजस्तो दुवैजना एकैपटक च्याटमा आइपुग्थे । आई एम टायर्ड बेबी भन्दै उसँग कुरा टुङ्गाइदिन्थे र यता घण्टौँ गफिन्थे । दिनभरका कहानी सुनाउँथे, लेख्न लागेको लेखको केही अंश पठाउँथे ।
कस्तो होला है । यो मन एउटालाई रोजिसकेपछि फेरि अर्को राम्रो लाग्ने, अर्कोसँग मायाका कहानी रच्न मन लाग्ने । समयको माग हो या परिवर्तन ? मनको भ्रम हो या वास्तविकता ? के अरुलाई पनि यस्तै हुन्छ ? खोई कसलाई सोधूँ अनि भनूँ मेरो मनको वास्तविकता ? कसैलाई सेयर गरौँ भने म आफैलाई नराम्रो सोच्ने हुन् कि ? एउटासँग प्रेम हुँदाहुँदै अर्को प्रेमी खोज्ने बिग्रेकी केटी भन्ने हुन् कि ? डाक्टरलाई देखाऊँ भने प्रमरोग भन्ने हुन् कि ? परिवारमा भनौँ भने बिहे गर्ने उमेर भयो भन्ने हुन् कि ?
उसँग त सिङ्गल नै छु भन्दै च्याट गरिरहेकी थिए । धेरै दिन अघिदेखि उसले भेट्ने प्रस्ताव राखेको थियो । केही वाहाना बनाउँदै टार्दै आएकी थिए । मन पराएको मान्छेलाई भेट्दा म आफ्ना आवेगहरुलाई थाम्न सक्दिन् कि भनेर डरको घण्टी बजिरहेको थियो । भोलि त भ्यालेनटाइन हो, जसरी पनि भेट्नुपर्छ । यता आफ्नो प्रमी मलाई नै भेट्न भनी पोखराबाट आएको थियो ।
कसलाई भेटूँ ? को हो मेरो प्रेमी ? दुवैलाई मनले एकैपटक प्रेम गर्यो यसमा दोषी को ? अवस्था निकै जटिल भन्यो । बिहान कलेज हाप्ने निर्णय गरँे । बिहानको समयमा नयाँ र दिउँसोको समयमा पुरानो ब्वाइफ्रेन्डलाई भेट्ने निर्णय गरेँ । भेट्न गए नयाँ ब्याइफे्रन्ड नौला सपना सजाएर । छक्क परेँ उसलाई देखेर किनकि ऊ मेरै पुरानो ब्वाइफ्रेन्ड थियो । कताकता मनमा डर अनि लाज लाग्यो ती दिनहरुको च्याट सम्झेर । सरी बेबी कान समाउँदै अगाँलोमा बाधिएँ, उसलाई नै वर्तमान र भविष्य सम्झेर ।